‘पहिला काम गरौं, लगानी कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पछि भन्दै गरौंला’
काठमाडौं । रोशनी केसी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि नौलो नाम होइन । देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत गीत ‘त्यहिँ सच्चा नेपाली’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भए संगै केसीको चर्चा चुलिएको छ। चलचित्र कसलाई आफ्नो भनुँ बाट अभिनय यात्रामा प्रवेश गरेकी रोशनीले आधा दर्जन बढि टेलिचलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छन भने केहि समय अघि उनले बनाएको डकुमेन्ट्रीले छायाँछवी पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो । साथै केसी हालैसालै 'राष्ट्रिय म्युजिक भिडियो निर्देशक' को अवार्ड पनि पाएकी छिन्। पछिल्लो समय चलचित्र निर्देशनमा लागेकी केसी नयाँ चलचित्रको स्कृप्ट लेखनमा व्यस्थ छिन । अभिनय र निर्दशनमा रमाएकी उनै अभिनेत्रीले फ्रेसन्युज नेपालसंग आफ्ना अनुभव सुनाएकी छिन् :
आजसम्म त ठिकै छु । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । फेरी घरमा नै बन्द भईएको छ । म चलचित्रको मान्छे अवश्य नै चलचित्रमा नै व्यस्त हुन्छु । अहिले एउटा स्क्रिप्टको काममा लागेकी छु ।
केही नयाँ आउँदै छ हो ?
नयाँ स्क्रिप्ट नै हो । अहिले चलचित्र तत्काल छाँकनमा जाने अबस्था छैन। निकै सोचविचार गरेर मात्र चलचित्र बनाउनु पर्ने अवस्था छ । कोभिडले फेरी सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ । त्यसैले धेरै नै सोचेर चलचित्र बनाउनु पर्ने हुनाले अहिले म स्क्रिप्टमै काम गरिरहेको छु । स्क्रिप्ट राम्रो भए चलचित्र अवश्य राम्रो बन्छ ।
यस्तो कोरोना महामारीको बेलामा पनि स्क्रिप्टको काममा व्यस्त छु भन्नुहुन्छ ? के हो
अहिले त म घर मै बसेर प्रोटोकल अपनाएर कामहरु गरिरहेकी छु । हामी निस्क्रिय प्राणी त होइन सक्रिए प्राणी भएको हुनाले हामीले काम गरिरहनुपर्ने हुन्छ। हामीले घरमा बसेर काम गर्दा पनि बिशेष ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो प्रोटोकल नै हो । मास्क लगाउने, स्यानीटाइज गर्ने, हात सफा राख्ने, घरमा नै बसेर कामहरु गर्ने नै हो ।
तपाई चलचित्र क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? यो यात्राको बारेमा केहि भन्दिनुस न ?
इच्छा थियो चलचित्र क्षेत्रमा केहि गर्नुपर्छ भन्ने । त्यो समयमा मलाई पारिवारिक रुपले यो क्षेत्रमा आउन खासै सपोर्ट थिएन। तर पनि आफनो इच्छा भएपछि मान्छेले जस्तो वाधा अड्चन तोडेर भए पनि आफूले रुचाएको काम गर्न खोज्छ। चलचित्रको यात्रा चाहीँ निर्देशक प्रताप सुब्बा सरसँग एक्टिङको ट्रेनिङ लिएर सुरु गरेकी हु। डान्सको ट्रेनिङ बसन्त श्रेष्ठ सरसँग लिएकी थिए । चलचित्र जगतमा उहाँहरु धेरै नै परिचत हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा नै । उहाँहरुबाट सिकेको ज्ञान र दिनुभएको हौसलाले आज म यो क्षेत्रमा छु । डेव्यु चलचित्र नेपालको प्रथम महिला निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठको चलचित्र कसलाई आफ्नो भनुँ बाट गरेकी हुँ । त्यो भन्दा अघि मैले तत्कालि समयका चर्चित टेलिचलचित्रहरु तिमी पुरुष, हस्पिटल लगायतमा काम गरेँ । मैले भारतीय गायक कुमार सानु, नेपाली गायक आन्नद कार्कीको म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरे ।
यहाँसम्म आइपुग्दा के के समस्या देख्नुभयो, भोग्नुभयो ?
चलचित्र क्षेत्रको यात्रा निकै कठिन छ । अझै चलचित्र क्षेत्र व्यावसायिक बन्न सकेको छैन। बाहिर जति राम्रो देखाए पनि भित्री पीडो छ। झन अहिले यो कोरोनाले त हामीलाई धेरै नै धारसाहि बनायो त्यो मात्र नभएर चलचित्र उद्योगलाई सरकारले पनि त्यति चासो र प्रथमिकता दिएको छैन । यस क्षेत्रमा लागेका सबैलाई राज्यबाट सम्मान सुरक्षा र पहिचान हुनुपर्ने हो तर हुन सकिरहेको छैन। चलचित्र क्षेत्रमा आबद्धहरुलाई अब के गर्ने भन्ने अन्योल छ। हामी स्वतन्त्र रुपले चलचित्र बनाउँछौं । करोडौंको लगानी गरेर चलचित्र बनाउछौं तर लगानी पनि उठाउन कठिन हुन्छ। सिनेमाले हल पाउदैंन। चलचित्र निमार्ण गरिसकेपछि हलसम्म पुर्‍याउन, हलमा चल्ने नचल्ने कस्तो व्यापार गर्छ भन्न सकिदैंन। अहिलेको समयमा हामीले हलमा चलचित्र देखाउन सक्ने अवस्था छैन। गत चैत्र देखि नै सिनेमा क्षेत्र झनै जटिलता तर्फ धकेलिएको छ ।
केहि चलचिहरु यहाँले निर्दशन गर्नुभयो थोरै त्यो अनुभव पनि सुनाइदिनुस न ?
मेरो चलचित्र 'डाक्टर खाते', 'जानी नजानी' हुन् । डाक्टर खाते अन्तरराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल तथा राष्ट्रिय चलचित्रमा पनि मैले प्रतिनिधित्व गरिसकेको चलचित्र हो । यसमा मैले रिसर्च गरेर केही महिना सडकमा बस्ने बच्चाहरुलाइ वर्कशपमा राखेर चलचित्र निर्माण गरेका थियौ म यसलाई सत्य घटनामा आधारित रहेर बनाइएको चलचित्र हो भन्न रुचाउँछु। जानी नजानी एउटा मनोरञ्जनात्मक चलचित्र हो । तर पनि यसमा मैले हाम्रो नेपालमा लोप हुँदै गएको ढाका कपडाको उद्योगलाई केही हदसम्म प्रोत्साहन गर्न खोजेकी छु । यहाँसम्म आईपुग्दा धेरै कठिनाईहरु पार गर्दै आएकी छु तर पनि यो हाम्रो काम हो र यसलाई अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
अहिले चलचित्र बनाउने अवस्था छैन तैपनि चलचित्र बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ ? किन
म यो फिल्डबाट टाढा हुन सक्दिनँ । यो बीचमा मैले तीज भन्ने डकुमेन्ट्री पनि गरेँ। उक्त डकुमेन्ट छायाछवी पुरस्कारबाट सम्मानित पनि भयो । वरिष्ठ कलाकार तथा संस्कृतिबिद् सत्यमोहन जोशीलाई लिएर देशभक्ती गीत पनि निर्देशन गरे । त्यो पनि नोमिनेशनमा परेको छ। यसरी गर्दै आएपछि कुनै पनि काममा लत लाग्नु भनेको स्वभाविक कुरा हो । कुनै पनि काममा दत्तचित्त भएर लाग्यो भने हामी अवश्य सफल हुन्छौं भन्ने मेरो मान्यता छ। अहिले चलचित्र क्षेत्र पनि केही हदसम्म राम्रो भइरहेको छ । ढिलो चाँडो परिवर्तन आउँछ भन्नेमा आशावादी छु ।
अबको चलचित्र कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म व्यख्या गर्न सक्दिन किनभने चलचित्र नचलेको पनि झण्डै एकवर्ष बढि नै भईसक्यो । अहिले छायांकनको क्रममा धेरै चलचित्रहरु छन । फेरी अहिले दोस्रो लहर शुरु भएको छ यसमा म के भन्न सक्छु होला र । अब चलचित्र उद्योग कस्तो ढंगबाट अघि बढ्छ अहिले नै भन्न सक्ने अबस्था छैन ।
तपाईले स्क्रिप्ट लेखिरहनुभएको चलचित्रको नाम के हो ?
यो चाहीँ अहिले नै नभनौं होला। यसको पछि नाम परिवर्तन हुन पनि सक्छ । मेरो स्क्रिप्ट तयार हुने बित्तिकै म सुटिङमा जान्छु । कोरोनाको दोस्रो लहरको असर कस्तो हुन्छ सोहि अनुसार योजनाहरु तय हुन्छन ।
म्युजिक भिडियोमा पनि झुकाव छ, तपाईले अहिलेसम्म कतिवटा म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुभयो ?
मैले तीनवटामा काम गरे। एउटा बलिउड गायक कुमार सानूसँग त्यसपछि निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठको लोकदोहरी गीतमा पनि काम गरे । मैले अन्जु पन्तसँग पनि काम गरेँ। छानेर कम कामहरु गर्छु। त्यो पनि स्किृप्ट कथा आफुलाई चित्तबुझ्यो भने काम गर्न तयार हुन्छु । मलाई चित्तबुझेन भने म गर्दिन । तुलनात्मक रुपमा धेरै जसो सिरियलहरुमा काम गरे। चलचित्र चाहीँ आधा दर्जनजति नै गरे होला ।
चलत्रिच क्षेत्रमा पनि सम्मान दिने चलन एकदमै बढ्दो छ ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
सम्मान दिनु भनेको कामको आदर गर्नु हो। अब साच्चै नै काम गरेको छ भने त सम्मान गर्नु उचित नै हो। फेरी हाम्रो लागि उर्जा भनेको पनि त्यो नै हो । दर्शकले गर्नुभएको मायाले नै हामी अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा टिकेका छौं। अब यो क्षेत्रमा पैसा धेरै नै कमाउन सक्छौ भन्ने चाहीँ छैन। त्यसकारण चलत्रिच सम्बन्धी अवार्ड कार्यक्रमहरु हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर अब धेरै नै हुने भएकाले यसमा पनि एउटा दायरा हुनु जरुरी छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।
यो देशको नागरिक हुनुको नाताले राजनीतिमा रुची हुन्छ। देशको समसामायिक घटना क्रम के के भईरहेको छ भन्ने कुरा हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म पनि यो देशको नागरिक हो र मलाई पनि देशको राजनीतिबारे थाहा पाउने हक र अधिकार छ ।
तपाईलाई मन पर्ने कलाकार ?
म नीर शाह र मदनकृष्ण श्रेष्ठको कामबाट निकै प्रभावित छु ।
तपाईको रुची ?
मलाई घुम्न पढ्न, काम गर्न मन पर्छ ।